प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद कालापानी र लिम्पियाधुरामा लम्पसार-सभापति देउवा « Kakharaa
प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद कालापानी र लिम्पियाधुरामा लम्पसार-सभापति देउवा
१० मंसिर, दाङ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा लम्पसार परेको दोहोर्‍याएका छन् । भारत सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओली सँगको सल्लाहमा नक्सा जारी गरेको अभिव्यक्ति दिएर कडा आलोचना खेपेका कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा लम्पसार पर्‍यो, देखियो’ देउवाले भने ।
मंसिर १४ गते हुन लागेको उप–निर्वाचनलाई लक्षित गरेर श्रीगाउँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई स्थायीत्व गर्न नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनु पर्ने बताए । यो सरकारलाई सच्याउन कांग्रेसलाई जिताउन आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको सरकारले देशको शान्ति सुरक्षालाई भगं पारेको दावी गरेका छन् । ‘द्वन्दकालमा ठुलो लडाई लडेर नेपाली कांग्रेसले देशमा सघिंय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो तर अहिलेको सरकारले यसलाई उल्टो गति तर्फ लैजान खोजिरहेको छ’ उनले भने।
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कम्युनिष्टको ज्याजदी रोक्न नेपाली काँग्रेसको बिजय आवश्यक रहेको दावी गरे । ‘कम्युनिष्टले जनतालाई पैसा बाँडेर राजनिति गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पैसा बाँडेर राजनिति गर्नु गलत हो । देशमा शान्ति र लोकतन्त्रलाई बचाउन कांग्रेसलाई मतदान गर्नुहोस् ।’
कार्यक्रममा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोईरालाले नेकपाको सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढेको हुँदा त्यो रोक्न नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जनताका सामु काम गरेर देखाउने पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस मात्र भएको दावी गरे।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता कृष्णा सिटौला, केन्द्रिय सदस्य एवं पुर्वभन्त्री दिपक गिरी,केन्द्रिय सदस्य देबेन्द्रराज कंडेल, नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य महिला नेतृ सिला खड्क ,राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा, प्रनितिधि सभाका लेखा समिति सभापती भरतबहादुर शाह, पूर्व सांसद गेहेन्द्र गिरी, जिल्ला सभापति किर्तिबहादुर खड्का लगाएतले सम्बोधन गरे । कांग्रेसले दाङ ३(२) मा प्रदेश सभा सदस्यमा केशव आचार्यलाइ उम्मेदवार बनाएको छ।